सिग्नेचर प्लिज !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
ईश्वरबल्लभ भन्नुहुन्थ्यो, ‘घर पनि एउटा सपना हो, घर नभए कविता कहाँ राख्ने ?’ त्यसको जवाफमा अब ‘कविता राख्ने’ ग्लुकको सपनाको त्यो घर उनले प्राप्त गरेको नोबेल पुरस्कारको रकमले निश्चय नै पूरा गर्दै छ ।
फाल्गुन १५, २०७७ राजव
कविता ढाडस दिन्छ
– लुइस ग्लुक
(६ खण्डमा लेखिएको चर्चित कविता ‘अक्टोबर’ बाट)
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको दक्षिण ढोकाको लगभग सामुन्ने पिलिम्पटन स्ट्रिट नामको एउटा साँघुरो एकतर्फी ट्राफिकको बाटो छ । यसको मुखमुखमै छ, अमेरिकी काव्यजगत्को ऐतिहासिक पुस्तक पसल ग्रोलियर पोएट्री बुक सप । पहिलोपटक मैले ग्लुकको कविता यहीँ छोएको हुँ । यहीं थियो— ग्लुकको कवितासंग्रह ‘द हाउस अन मार्सल्यान्ड ।’
ग्रोलियर पोएट्री बुक सप सिर्फ कविताका लागि समर्पित पसल हो । यसभित्र कविता र कविताबारे लेखिएका समीक्षा, आलोचनाबाहेक अर्को कुनै पनि विधाको पुस्तक खोजेर पाइन्न । आफ्नो चारैतिर विश्वका अनेक कविहरूका कविता संग्रह सजाएर बसेको छ— ग्रोलियर पोएट्री बुक सप । कवि, कविता, यसबारेका सूचना र कविताप्रेमी पाठकको अलावा यहाँ अर्को कोही मानव जीव र कुरोकन्थो भेटिन्नन् । विल्कुल कवितामय छ— ग्रोलियर पोएट्री बुक सप । त्यसैले कवि डोनाल्ड हल कविताका लागि यसलाई विश्वकै भव्य स्थान मान्दथे । योगदानको अर्थमा यो आफैं एउटा लामो सुन्दर कविता हो । छिट्टै एक शताब्दीको हुन लाग्दै छ— ग्रोलियर पोएट्री बुक सप । यस समयबीचका हरेक अमेरिकी कविहरूको राम्रो अखाडा रहिरहेको छ यो बुक सप । कुनै समय टी.एस. इलियट, ई.ई. कमिंग्स, मेरियन मुरजस्ता आधुनिक कविहरूको अखाडा थियो— ग्रोलियर पोएट्री बुक सप । त्यसपछि एलिजावेथ विसप, रोबर्ट लोयल, जेन केन्नन, डोनाल्ड हल, जेम्स टे, लुइस ग्लुकदेखि भर्खरको कवि ओसन भ्वाङसम्मको अखाडा हो यो ।
यो बुक सपले मलाई न्युरोडको प्युखास्थित वरिष्ठ कवि मित्र विमल निभाको तत्कालीन किताब पसल ‘साहित्य घर’ को संस्मरणात्मक झल्को दिनेगर्छ । किनभने ग्रोलियर पोएट्री बुक सपको भित्री स्वरूप ‘साहित्य घर’ को जस्तो थियो, त्यस्तै छ । लगभग चार सय स्क्वायर फिटको क्षेत्रफलमा बसेको छ यो बुक सप । स्तरीय कविताका पुस्तकहरूले मात्र घेरिएको यसभित्र चार–पाँच जना मुस्किलले उभिन पुग्छ । तर, त्यत्ति सानो स्पेसभित्र कविताका सयौं पुस्तक डाइनिङ टेबुलमा मीठा आकर्षक परिकारहरू सफासँग लोभ्याएर राखिएझैं एकदम व्यवस्थित रुपमा राखिएका छन् । चाङमा राखिएका किताबहरू पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ त्यस्तै व्यवस्थित रूपमा प्रदर्शन गरिएका छन् । मेरा आँखाले आविष्कार गरेको दिनदेखि ग्रोलियर पोएट्री बुक सप मेरो पनि प्रिय अखडा हुन थालेको थियो । त्यसबेलाको यसको स्वामिनी थिइन्— लुइसा सोलानो । मेरो कविता संग्रह ‘क्रूरको सौन्दर्य प्रेम’ मा ‘हाइटेक कविता संग्रह बुझ्न खोज्दै’ भन्ने शीर्षकको कविता छ । त्यस कवितामा मैले यो बुक सप र लुइसा सोलानोलाई प्रमुख रूपमा प्रसंगात् उल्लेख गरेको छु ।
एक साँझ म ग्रोलियर पोएट्री बुक सपमा सद्य प्रकाशित भनेर राखिएको कविता संग्रह देख्छु र टिप्छु । त्यसलाई हाइटेक कविता संग्रह भनिएको पढ्छु । यो भनाइले नै मलाई छक्क पार्छ । म त्यसका पन्नाहरू पल्टाउन थाल्छु । एकदम अनौठो लाग्न थाल्छ । कविता भनेर राखिएका त्यसका पानाहरूमा अक्षरहरू छैनन्, अक्षरका सट्टा त्रिकोणहरू, सम कोणहरू, चौकोणहरू, मोटा, बांगा, पातला, झिरजस्ता रेखाहरू कविताको आकार मिलाएर राखिएका छन् । एउटा मात्रै होइन पूरै संग्रहका कविता यस्तै त्रिकोण, चौकोण र त्यस्ता रेखाहरूले लेखिएका छन् र भरिएका छन् । यसकारण यसलाई हाइटेक कवितासंग्रह भनिएको रहेछ । अब यी कविता कसरी बुझ्ने ? मेरो मथिंगल नाच्नु स्वाभाविक थियो । पुस्तक उचालेर देखाउँदै मैले लुइसा सोलानोसँग सोधेको थिएँ, ‘के हो यो ?’
लुइसाको सहज व्यापारिक उत्तर थियो, ‘कवितासंग्रह हो ।’ लुइसाको यो जवाफ मेरो अपेक्षाको थिएन । त्यसकारण मैले ‘एक हाइटेक कवितासंग्रह बुझ्न खोज्दै’ शीर्षकको आफ्नो त्यस कविता यही जवाफ खोज्ने आत्मधुनमा लेखेको हुँ । यथार्थमा लुइसाबाट त्यस्तो जवाफ पाएको म फेरि कवितामा लुइसासँग आफ्नो प्रश्नको जवाफ खोज्दै थिएँ,
अचम्मले एक कविता संग्रहका पाना–पाना पल्टाउँदै
ग्राहकहरू मर्माहत सोध्छन्, यी के हुन् ?
द ग्रोलियर पोएट्री बुकसपकी लुइसा भन्छिन्,
‘ती हाइटेक कविता हुन् ।’
वास्तवमा लुइसा सोलानो नै हुन् मलाई ग्लुक पढ्न प्रेरित गर्ने । अमेरिका आएको सुरु सुरुका हरेकजसो साँझ आफ्नो साहित्यिक आनन्दका लागि र आत्मविस्थापनको उदासी मेट्न पनि म द ग्रोलियर पोएट्री बुक सपभित्र पस्थें । सुरुका दिनको त्यस्तै एक साँझ अनेक किताब ओल्टाइपल्टाइ गर्दै उनको काउन्टरको बुक स्ट्यान्डमा राखिएको ‘द हाउस अन मार्सल्यान्ड’ पल्टाउन पुग्छु । मतिर नजर दिइरहेकी लुइसा तुरुन्त मलाई भन्छिन्, ‘सी इज ग्रेट ।’
म पाना पल्टाउँदै गर्छु । फेरि लुइसा भन्छिन्, ‘लुइस ग्लुक धेरै राम्री कवि हुन् यिनलाई पढ ।’ म सुनिरहेको हुन्छु । तर, बोलेको हुन्न ।
‘ठूलो बिछ्यौनामा, अँधेरी रातको प्रहर
बालाई कुरिरहेका छौँ’
म ‘फर माई मदर’ शीर्षकको कविताका यी पंक्तिहरूमा आइपुगेको थिएँ । लुइसाले फेरि भनेको सुन्छु, ‘सी इज माई फेभरेट ।’
‘मार्सल्यान्ड’ का पानाहरू पल्टाउँदै गर्दाको पाँच–सात मिनेटको त्यस समयभित्र म ग्लुकलाई पढ्न प्रेरित भइसकेको थिएँ । किन्ने होइन पढ्ने उत्साहमा मैले लुइसासँग सोधेको थिएँ, ‘यो क्याम्ब्रिज पब्लिक लाइब्रेरीमा पाइन्छ ?’
सम्भवतः लुइसाले यो सुन्न चाहेको प्रश्न थिएन । तर, उनको जवाफ साह्रै विनम्र आयो, ‘ट्राइ देर ।’
मैले यसै गरें । अपार्टमेन्ट फर्कंदाको बाटोमा पर्ने क्याम्ब्रिज पब्लिक लाइब्रेरी पसें । र, ‘सिमसारमा घर’ अर्थात् ‘द हाउस अन मार्सल्यान्ड’ लिएर निस्कें ।
सुरुमा मैले लुइस ग्लुकको कविता–पाठ सुनेको क्यामब्रिज सहरको ब्रोड–वेस्थित एम साकलर भवनको सभाहलमा हो । त्यहाँ ग्लुक कविता पाठ गर्दै छिन् भन्ने जानकारी मलाई त्यही बुक सपकी उनै लुइसा सोलानोले दिएकी थिइन् । यो चौध वर्षअगाडिको कुरो हो । तिनताकाको चिसो दिनको एक साँझ म ग्लुकलाई सुन्न अथर एम साकलर भवनको सभाहलमा पुगेको थिएँ । विशेषगरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अंग्रेजी साहित्यका प्रोफेसर र तिनका विद्यार्थीका लागि राखिएको थियो— ग्लुकको कविता पाठको त्यो कार्यक्रम । तर, त्यस कार्यक्रममा इच्छुक जोकोहीलाई पनि प्रवेश दिइएको थियो । त्यसकारण एक इच्छुक मैले पनि ग्लुकलाई सुन्न त्यहाँ प्रवेश पाएको थिएँ । त्यस बेलासम्म मैले ग्लुकको ‘हाउस अफ मार्सल्यान्ड’, ‘ट्राइएम्फ अफ एक्लिज’, ‘वाइल्ड आइरिस’ जस्ता कविता संग्रह पढिसकेको थिएँ । तीबाहेक विभिन्न साहित्यक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित उनका कविता पाएसम्म पढ्दै उनलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ ।
त्यस साँझ ग्लुकले प्रकाशित आफ्नो कविता संग्रह ‘अभेर्नो’ बाट थुप्रै कविता पाठ गरेकी थिइन् । पाठपछि ‘अभेर्नो’ को पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम पनि राखिएको रहेछ । यो कुरो मलाई त्यहाँ प्रवेश गर्नुपूर्व थाहा थिएन । त्यस दिन मेरो खल्तीमा नोटबुकबाहेक नोट (नगद) थिएन । मैले त्यहाँ विक्रीमा राखिएको किताब किन्न सक्ने कुरै भएन । तथापि किताब किन्दै ग्लुकको हस्ताक्षर लिन लाइनमा लागेकाहरूसँगै म पनि उभ्भिएँ । किताब बोकेर ग्लुक बसेको कुर्सीछेउ पुग्दै विद्यार्थीहरू ‘अभेर्नो’ मा हस्ताक्षर गराउँदै थिए । यही क्रममा म पनि ग्लुकछेउ पुगेँ । ग्लुकका आँखा आश्चर्यवत मेरा खाली हात हेर्दै थिए । खासमा उनी मेरो हातमा
आफ्नो ‘अभेर्नो’ खोज्दै थिइन् । मलाई अप्ठेरो लाग्यो नै । यो अन्यमनस्क स्थितिमा पहिले हात मिलाउन मैले ग्लुक सामुन्ने आफ्नो दाहिने हात बढाएँ । उनले पनि आफ्नो हात विनम्रताका साथ मेरो हातमा मिसाइन् । उनको न्यानो हातले मेरो हिच्किचाहट र संकोच हल्का भयो । म आफ्नो खल्तीबाट नोटबुक झिक्न प्रेरित भएँ । मैले कमिजको खल्तीभित्र आफसेआफ चलमलाइरहेको नोटबुक स्वाट्ट झिकें । फटाफट त्यसको खाली पन्ना पल्टाएर उनको सामुन्ने तेर्स्याउँदै भनें, ‘सिग्नेचर प्लिज !’
अब भो ? किताबको सट्टा नोटबुकको खाली पन्ना सामुन्ने तेर्सिएको देखेर ग्लुकको अनुहार बदलियो । उनको मुद्रा छलिएको, छक्किएको जस्तो भइरह्यो । उनी हक्क न बक्क भइरहेकी थिइन् । म उनको हस्ताक्षर लिन हठवत् तर सहज उभिइरहेको थिएँ । विशेषतः मेरो अनुहारको रङ उनलाई प्लिज भनिरहेको थियो । मपछाडि हातहातमा किताब अँठ्याएर त्यसमा उनको हस्ताक्षर गराउन थुप्रै उभ्भिइरहेका थिए । यो गलफतीमा तिनलाई कुराइरहनु ठीक थिएन । यो स्थितिले विवश बनेकी ग्लुकले निधार खुम्च्याउँदै मेरो आग्रह भनौं वा बच्काना हठ जे भनौं स्वीकार गरिन् । र, अन्कनाउँदै मेरो हातको नोटबुकको त्यस पन्नामा आफ्नो हस्ताक्षरका लागि बलपेनको टुप्पो स्वाट्ट नचाइन् । मेरो हठ सफल भएको थियो । खुसीले मैले ग्लुकलाई भनें, ‘थ्यांक्यु ।’
ग्लुकले योभन्दा अगाडि यसरी कुनै अपरिचितले दिएको खाली कागजमा सायदै हस्ताक्षर गरेकी होलिन् । न अब कतै गर्लिन् । न म झैं खाली चिर्कटो तेस्याउँदै उनको सामुन्ने कोही पुग्यो नै होला, नपुग्ला । कागजमा मात्र होइन ग्लुकको हस्ताक्षर मेरो मन र मस्तकमा पनि कोरिएको छ । वास्तवमा ग्लुकको कवि–मन कत्ति विनम्र र सरल छ भन्ने उदाहरण हो यो हस्ताक्षर । मैले दिएको नोटबुकको त्यस पन्नामा उनको हस्ताक्षर पाउँला भन्ने मेरो मनमा दोधार थियो नै । त्यसकारण पुस्तक किन्दै त्यसमा ग्लुकलाई हस्ताक्षर गराउन उभिएको त्यस लाइनमा म बिनापुस्तक नउभियौं कि भन्ने सोचमा थिएँ । तर, मभित्रको साहित्यिक बल जाग्यो । कोसिस त गरौँ, हद भए ठाडै अस्वीकार गर्लिन्, के होला त, भए अपमानित हुँला, त्यो पनि सहुँला, प्रयोग नै सही भन्ने अठोटमा म लाइनमा उभिएको थिएँ । मभित्र आशाको प्रतिशत विल्कुल कम थियो । तथापि म आफ्नो नोटबुकको निर्दोष सादा पन्नामा उनको हस्ताक्षर लिने तीव्र हुटहुटीले लाइनमा लागेको थिएँ । तर, ग्लुकले मलाई निराश पारिनन् । मेरो साहित्यिक हठ सफल भएको थियो । ग्लुकको हस्ताक्षर पाएको नोटबुक खल्तीमा घुसारेर म प्रफुल्लताका साथ अथर एम साकलर भवनको त्यस सभा हलबाट बाहिर निस्केको थिएँ ।
अमेरिकामा मैले बसोबास सुरु गरेको म्यासाचुसेट राज्यको क्याम्ब्रिज सहर थियो । म क्याम्ब्रिजको युनियन स्ट्रिटको एक नम्बरको घरमा बस्थें । एक युनियन स्ट्रिट क्याम्ब्रिज र चौध एल्सओर्थ एभन्यु क्याम्ब्रिजबीच मुस्किलले एक किलोमिटरको फरक छ । यो दूरीबीचको पूर्वतिरको युनियन स्ट्रिटमा म बस्थें । पश्चिम दिशाको चौध एल्सओर्थ एभिन्युमा लुइस ग्लुक बस्थिन् । ग्लुक अहिले पनि क्याम्ब्रिज सिटीको आफ्नो दुई नम्बरको एल्सओर्थ एभिन्युको त्यही कन्डोमोनियममै बस्छिन् । मैले युनियन स्ट्रिट छोडेको १७ वर्ष भयो । युनियन स्ट्रिटपछि म नजिकको एलम स्ट्रिटको अपार्टमेन्टमा सरें । त्यसपछि दस विन्टर स्ट्रिटमा सरें । यी तीनवटै ठेगानबाट पनि मेरो हिँडाइमा एल्सओर्थ एभिन्युस्थित ग्लुकको कन्डोमोनियम पुग्न दसदेखि पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी लाग्दैन । क्याम्ब्रिज सिटी बसुन्जेल मेरो साँझ–बिहानको हिँडाइ, कुदाइको व्यायामिक चक्कर यतै हुन्थ्यो ।
नोबल कमिटिको तर्फबाट ग्लुकलाई वर्ष २०२० को नोबेल पुरस्कारका लागि मनोनीत गरिएको जानकारी दिन एडम स्मिथले फोन गर्दा ग्लुक आफ्नो यै कन्डोमोनियममै थिइन् । बिहान सात नबज्दैको फोन रहेछ त्यो । सायद त्यसबेला ग्लुक बिउँझिएकी मात्र थिइन् । ग्लुक र स्मिथबीचको संवाद सुनेपछि यहि बुझिन्छ । ग्लुकलाई वर्ष २०२० को नोबेल पुरस्कारका लागि मनोनीत गरिएको यो समाचार मैले छिप्पिएको बिहान फक्स न्युजको लोकल च्यानल फक्स–२५ टीभीबाट सुनेको हुँ । सुन्नासाथ म एकदम आश्चर्यमा परें । यताको साहित्यिक माहोलमा यो प्रत्याशित समाचार थिएन । तर, सत्य थियो । कालान्तरमा ग्लुकले नोबेल पुरस्कार पाउलिन् भन्ने अनुमान मलाई विल्कुल थिएन । उपन्यासकार फिलिप रथलाई यो पुरस्कार दिने घोषणा होला, होला भन्ने भइरहन्थ्यो वर्षैपिच्छे । यस्तो अनुमानबीच २०१७ मा छक्क पार्ने गरी गीतकार, संगीतकार गायक बब डिलनलाई नोबेल दिने घोषणा भयो । अन्दाजको के भरोसा ? तथापि फिलिप रथको मृत्यु नहुन्जेल नोबेलले उनलाई कुनै न कुनै वर्ष सम्मानित गर्ला भन्ने लागिरहन्थ्यो । फिलिप रथको मृत्युसँगै यो अन्दाजको क्रमको पनि अन्त्य भयो । तर, लुइस ग्लुकको हकमा यस्तो अन्दाज पनि गरिएको थिइएन ।
निश्चय नै लुइस ग्लुक अग्रपंक्तिकी अमेरिकी कवि हुन् । आफ्नो लेखनको पाँच दशकको अवधिमा उनले पुलित्जर, बेलिन्जेन, लनान वालेस स्टिभेन्सन, ट्रान्स ट्रोमर, न्यास्नल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्डजस्ता थुप्रै, थुप्रै प्रतिष्ठित पुरस्कार, सम्मान, फेलोसिप प्राप्त गरिसकेकी छन् । अमेरिकी साहित्यजगत्मा उनको नाम आदरका साथ लिइन्छ । उनको पक्षमा कुनै पनि पुरस्कार जाँदा त्यसले आलोचना खेप्नुपरेको छैन । यसपटक नोबेल कमिटीले उनलाई रोजेर धेरैलाई सुखद आश्चर्यमा पार्‍यो ।
ग्लुकलाई रोज्नु नोबेल कमिटीको विगतको दाँजोमा विवादमुक्त हुने कोसिसको रूपमा सोच्नेहरू पनि छन् । तर, ग्लुक पुरस्कारको जन्जालभन्दा धेरै माथि छिन् । उनको रचनात्मकताको उचाइलाई सम्मान गर्न मै हुँ भन्ने कुनै पनि फेलोसिप, सम्मान, पुरस्कार अग्रसर रहन्छन् नै । पुरस्कार भनेको कसैलाई ह्याउन कसैलाई दिइन्छ, कहिलेकाहीं कुनै निर्णायक दिनुपर्ने कसैप्रति बायस भयो भने अर्को कसैलाई दिइन्छ, यस्तो कूटनीति हुँदा पनि पुरस्कार पाइन्छ । पुरस्कारबारे ग्लुकको धारणा जान्न कसैले सोधेको प्रश्नको जवाफमा ग्लुकले भनेका यथार्थ कुराहरू हुन् यी । ग्लुकको स्वाभिमानले पुरस्कारको कुनै माने राखेको देखिँदैन । आफूलाई नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा भएको सुनेर पनि त्यो बिहान एडम स्मिथसँग कुरा गरिरहँदाको क्षण उनको स्वर त्यत्ति उत्साहित थिएन । कुरो रेकर्ड भइरहला त्यसकारण, वास्तवमा म बोल्न चाहन्न भन्दै आफूलाई कफीको तलतल मेट्ने नै हतारो भएको कुरा उनी एडम स्मिथलाई आभास गराउँदै थिइन् ।
लुइस ग्लुकको कन्डोमोनियम सामुन्ने खुला चउर छ । गर्मी मौसममा यो चउर हराभरा हुन्छ । लुइस ग्लुक अवश्य यसको आनन्द लिँदी हुन् । जाडाका दिनमा यो चउर पूरै हिउँले टन्न भरिएको हुन्छ र हिउँको विशाल कालीनमा परिणत हुन्छ । यस सुन्दर चउरको समीपमा छ— हालै अत्यन्त आधुनिक संरचनामा निर्मित क्याम्ब्रिज पब्लिक लाइब्रेरीको नयाँ भवन । पाँच–सात मिनेटको पैदल दूरीमा हार्वर्ड विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका थुप्रै विभागका स्कुलहरू छन् । कुनै समय यस विश्वविद्यालयमा उनी पढाउने पनि गर्थिन् । उनको बसाइवरिपरि विज्ञान, कला, नाटक, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्यका सुन्दर केन्द्रहरूले घेरिएको छ । यो सब बौद्धिक जीवन्तताको केन्द्रमा रमाउन सायद उनले आफ्ना लागि एल्सओर्थ एभको त्यो कुचुक्कको कन्डोमिनियम रोजेकी होलिन् ।
देखिँदा सरल लाग्ने पंक्तिमा गहिरो भावगुम्फनको कला भर्ने ग्लुक खाँटी अमेरिकी भावभूमिकी एकदम तीव्र संवेदनशील कवि हुन् । उनको निश्छल, सरल व्यवहार नोबेल पुरस्कार पाउँदाको उनको प्रतिक्रियामा झल्किन्छ । सिर्फ दुई मिनेट मात्रै बोल्ने सर्तमा उनी एडम स्मिथसँग बोल्दै थिइन् । वार्ता तीन मिनेटसम्म लम्बियो र उनले दुई मिनेट भइसक्यो भनेर स्मिथलाई लज्जित पार्दै वार्ता रोक्न बाध्य पारेकी थिइन् । स्मिथको ‘नोबेल पुरस्कारले तपाईंका लागि के माने राख्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ग्लुकले अरू कुराको साथमा एक व्यावहारिक जवाफ दिएकी थिइन्, ‘म भर्मन्ट राज्यमा घर किन्छु, क्याम्ब्रिजमा मेरो एउटा कन्डोमोनियम छ, अब म भर्मन्टमा एउटा घर किन्न सक्छु ।’
महान् ब्रिटिस लेखक रुडयार्ड किप्लिङले आफ्नो जीवनको लगभग आधा दशक भर्मन्टमा बिताएका थिए । भर्मन्टको डमर्सटोनको उनकै नाममा राखिएको रुडयार्ड किप्लिंग रोडको उनको घर अहिले साहित्यिक तीर्थको रूपमा प्रख्यात छ । जुन कुनै पनि लेखक, कवि कलाकारलाई यसको प्रकृति र शान्त वातावरणमा सेटल हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने भइरहन्छ नै । ग्लुक पनि आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा पटकपटक भर्मन्टमा बसेकी छन् । ग्लुकलाई आफ्नो यस प्रिय स्थान भर्मन्टमा एउटा घर किन्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको रहेछ । स्मिथलाई दिएको जवाफमा उनको यो सपना झल्किन्छ । ७७ वर्षको उमेरमा पनि घर किन्ने सपना एउटा कविको मनमा मात्र जीवित रहन्छ । घरको सपनाले नै कविता जीवित राख्छ ।
नेपाली सन्दर्भको ठूलो पुरस्कार मानिने मदन पुरस्कारले सम्मानित आदरणीय कवि ईश्वरबल्लभ भन्नुहुन्थ्यो, ‘घर पनि एउटा सपना हो, घर नभए कविता कहाँ राख्ने ?’ त्यसको जवाफमा अब ‘कविता राख्ने’ ग्लुकको सपनाको त्यो घर उनले प्राप्त गरेको नोबेल पुरस्कारको रकमले निश्चय नै पूरा गर्दै छ । सम्भवतः कविताप्रति पूर्णतः समर्पित उनका गर्मीका दिन यसपटकदेखि भर्मन्टको नयाँ घरमा र जाडाका दिन क्याम्ब्रिजमा बित्नेछन् । भर्मन्टको स्वप्नघरको लनबाट ग्रीष्मकालीन रात्रि आकाश हेर्दै लुइस ग्लुक फेरि पनि भन्लिन्, ‘मेरो साथी शशी उदाई/आजको रात ऊ सुन्दर देखिएकी छे/ऊ कहिले सुन्दर देखिएकी छैन र ?’
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७७ ११:११